true public-relations /zu-ZA/tools-for-life/public-relations/steps/what-is-public-relations.html read 6 7 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/public-relations_zu_ZA.jpg Izisekelo zobuHlobo noMphakathi
Izisekelo Ezimbili Zokuthuthukisa
Kunomunye umthetho oyisisekelo kubuhlobo nomphakathi ovame ukunganakwa noma unikezwe ukubaluleka okwanele, kepha uma ungawusebenzisa kahle ungaphumelela lapho usebenzisana nabanye.
Umuntu wathola ukuthi indlela yokwenza ubudlelwano babantu busetshenziswe kahle “ukuziphatha ngenhlonipho.” Ukuziphatha ngenhlonipho akugcini kuphela ngokulungisa izikhathi ezinzima phakathi kwabantu, futhi kuyabuthuthukisa ubudlelwano.
Ngisho abasemaqaqasini, okusho ukuthi abantu abaphila ngezindlela ezilula kakhulu ngaphandle kwemishini yanamuhla, banezindlela ezithuthukile zokuthi baphathana kanjani.
Lokhu kwafundwa ocwaningweni lwezinhlanga ezihlala emaqaqasini-ezingamashumi amabili nanye oluveza ukuthi zilandela futhi zisebenzisa amasiko azo (izindlela ezamukelekayo zokwenza), imithetho noma amasiko phakathi kwabantu, naphakathi kwabo nezizwe ezahlukene.
Kuyo yonke indawo emhlabeni, noma ngabe abantu bavela kuliphi izwe noma endaweni, abakwamukeli neze “ukuziphatha okungenanhlonipho.”
Labo “abanngenako ukuziphatha ngenhlonipho” abamukelwa.
Futhi-ke, into ebaluleke kakhulu ukuyiqonda nokuyisebenzisa kubuhlobo nomphakathi “ukuziphatha ngenhlonipho.”
Ngakho-ke, uma wena noma iqembu labantu abasebenzisa ubuhlobo nomphakathi lingazange libe nekhono kulokho okwamukelwa njengo “kuziphatha ngenhlonipho” yilabo obabonayo, uzohluleka. Wena noma iqembu ningase nazi zonke izindlela ezibalulekile zobuhlobo nomphakathi kepha nokho nihluleke ngenxa yesizathu esisodwa soku “ngaziphathi ngenhlonipho.”
“Ukuziphatha ngenhlonipho” kunezinto ezimbili okuyizinto okumelwe uzenze:
(a) unikeze omunye umuntu ukubaluleka futhi
(b) sebenzisa umjikelezo oyi-two-way comm.
UMjikelezo oyi-Two-way Comm
Ekusebenzeni nabantu, akunakwenzeka ukudlulisa imibono yakho futhi uthole noma ikuphi ukwamukelwa ngaphandle komjikelezo oyi-two-way comm.
Umjikelezo kuyisikhathi esithile esinesiqalo nesiphetho. Emjikelezweni wokuxhumana sinomuntu oqala ukuxhumana nomuntu wesibili owamukela loko kuxhumana. Ube esekuqonda futhi anikeze i-acknowledgement futhi lokhu kuletha ukuphela komjikelezo. Ngokuthi acknowledge kushiwo ukuthi noma ukwenza okuthile ukukhombisa omunye umuntu ukuthi uzwile futhi waqonda ukuxhumana kwakhe. Isibonelo, ukuthi “Ngiyabonga.”
Kumjikelezo o-two-way wokuxhumana, umuntu wesibili uma-nje uqala ukuxhumana nomuntu wokuqala owamukelayo, akuqonde, futhi enze i-acknowledgement. Ngamanye amagama, umjikelezo oyi-two-way comm umjikelezo ojwayelekile wokuxhumana phakathi kwabantu ababili. Akuwona umjikelezo oyi-two-way comm uma noma imuphi umuntu engakuqali yena ukuxhumana lapho kufanele akuqale.
Noma ngabe yiziphi ezinye izenzo ezikhona lapho uhlangana nomuntu, lezi zinto ezimbili—ukunika ukubaluleka komunye umuntu, nokusebenzisa umjikelezo oyi-two-way comm—kuyathinteka. Noma yimuphi umuntu ongawasebenzisi lamaphuzu uzozithola yena kukanye nomyalezo wakhe kungamukelwa.
Ukuqhosha (ukwenza sengathi ungcono noma ubaluleke ukwedlula omunye) nokusebenzisa amandla kungahle kufinyelele ekulawuleni omunye umuntu noma okuthile kepha lendlela ayisoze yakutholela ukwamukelwa nokuhlonishwa kwe-PR.
Isizathu sokuthi udokotela wezifo zengqondo noma isazi sezengqondo bengazange bathole ukuthakazelelwa okujwayelekile (imizwa yomusa, ukuvunywa nokwesekwa) yingoba bangabantu (a) abaqhoshayo kakhulu futhi, (b) bakhombisa umuzwa onamandla wokungathandi futhi wokungahloniphi abantu. Izibonelo zalokhu yizinto ezishiwo ngabantu ngodokotela bezifo zengqondo kanye nezazi zokusebenza kwengqondo, njengokuthi “umuntu uyisilwane,” noma ukuthi “abantu bonke bayahlanya,” njll.
Abanako nje “ukuziphatha ngenhlonipho” ngoba (a) abacabangi noma banikeze abanye umuzwa wokubaluleka futhi (b) abawusebenzisi umjikelezo ophelele wokuxhumana.
Ubuhlobo NoMphakathi Obuphumelelayo
Bonke ubuhlobo nomphakathi obuyimpumelelo bakhelwe phezu kwesisekelo sokuziphatha ngenhlonipho njengoba lezi kuyizindlela zokuqala ezakhiwe zokwenza ubudlelwano phakathi kwabantu bungabi buhlungu, bube nzima noma bungathandeki.
Ukuziphatha ngenhlonipho kwaziwa kakhulu futhi kuyahlonishwa ukwedlula isihloko ubuhlobo nomphakathi. Ngenxa yalokho, izenzo zakho zobudlelwano nomphakathi ngeke ziphumelele uma ungasebenzisi ukuziphatha ngenhlonipho.
Isibonelo, uma ungamnaki unogada osebhizinisini futhi umphathe sengathi akabalulekile, ngenkathi ulapho ukuhlangana nomphathi wakhe, kungahle kube nomphumela omubi kakhulu kuwe. Ngoba phela, cabanga ukuthi ubani okhuluma nomphathi? Unogada ukhuluma nomphathi wakhe malanga wonke.
Ukumisa isikhathi nendawo yokuhlangana bese, ungasigcini, ukuthumela isimemo sekwephuze kakhulu ukuthi samukelwe, ukungaphi ukudla noma isiphuzo kumuntu ozokubona, ukungasukumi lapho isivakashi singena ehhovisi noma ekhaya lakho, ukuphatha abasebenzi bakho njengabantu abayizisebenzi esidlangalaleni, ukuphakamisa izwi lakho ngokuzwakalayo futhi ngendlela engathandeki emphakathini, ukuphazamisa okushiwo omunye umuntu “ukwenza okuthile okubaluleke kakhulu,” ukungasho ukuthi ngiyabonga noma ubusuku obuhle—konke lokhu “kuyimikhuba emibi.” Abantu abenza lezi noma ezinye izenzo eziyinkulungwane zokuziphatha kabi bayenqantshelwa yilabo abahlangana nabo empilweni.
Futhi-ke, njengoba ubuhlobo nomphakathi ngokuyisisekelo sokwemukeleka ngakho-ke ukungaziphatha ngenhlonipho kuyenza yehluleke ngokuphelele.
Ukuze usebenzise amasu okwenza imisebenzi yobuhlobo nomphakathi ngempumelelo, kufanele ube nokuziphatha ngenhlonipho.
Lokhu akunzima. Kufanele ubheke imibono yakho nemizwa oyikhombisa kubantu bese ulungisa noma yini engabangela ubunzima lapho usebenzisana nabanye. Ingabe abantu ngamunye babalulekile? Futhi, kufanele ube nomjikelezo wakho oyi-two-way comm ngokuphelele, ubemuhle futhi ngokwemvelo kakhulu kangangokuthi kunganakeki.
Ngalezo zinto ezimbili sezilungisiwe, uma-nje usungafunda kabanzi ngomuntu noma iqembu osebenza nalo nokuthi bacabanga ukuthi “ukuziphatha ngenhlonipho” kuyini, ukuze ukwazi ukusebenzisa lolu lwazi lapho uhlangana nabo.
Uma-nje, ubuhlobo nomphakathi busetshenziswe ngokufanele, ungafinyelela ebuhlotsheni nomphakathi obuphumelelayo.
Awukwazi ukuthi abantu babaluleke kangakanani. Eqinisweni, kuye kwaphawulwa ukuba kuphambene nalokho ongase ukucabange. Ngamanye amagama, abantu abasezikhundleni eziphansi empilweni banokuzazi okubaluleka kwabo kudlula okomuntu osesikhundleni esiphakeme. Ngamanye amagama, indlela umlindi womnyango ezicabangela ukubaluleka kwakhe ngakhona kunokudlula kude le umphathi wenkampani enkulu.
Ngakho-ke ungabanaki abantu ngokuzibeka engcupheni yokwehluleka.
Ukuzama ukuthola ukunakwa okukhethekile kothile ngokumncoma kakhulu umuntu nako akusizi kakhulu. Empeleni, ezikhathini eziningi kuzomsolisa umuntu omncomayo ngoba akukholeki kunokuzenzisa. Futhi ukuqamba amanga kwakho kuzobonakala kuwo wonke umuntu ngaphandle kwesiwula.
Ukubaluleka komuntu kwenziwa kucace kuye ngokumbonisa inhlonipho noma umenze azi nje ukuthi uyambona nokuthi wamukelekile kuwe.
Isibonelo, ungakhombisa kalula umuntu ukuthi ubalulekile ngokumane uthi “Sanibonani ekuseni” noma “Sanibonani” ​​lapho uqala ukumbona umuntu. Imvamisa kuyamjabulisa umuntu.
Futhi, ukwazi amagama abo nokuthile ngempilo yabo kuzodala ukubaluleka. Isibonelo, uma uzohlangana nomuntu bese ubona owamukela izivakashi okwesibili, mbingelele ngegama lakhe futhi ubuze nokuthi indodana yakhe iqhuba kanjani kwezemidlalo—okuyinto ngokusobala aziqhenya ngayo okubonakala ngezithombe anazo edeskini lakhe—futhi uzobona ukuthi unobungane futhi uyasiza. Ngalezo zenzo ezilula, unikeze owamukela izivakashi ukubaluleka.
Ukwenza sengathi ubaluleke kakhulu kunabanye kwamukeleka njengekati elifile emshadweni—mhlawumbe isibonelo esiwubuwula, kepha uthola okushiwoyo. Kungenza abantu bangafuni ukuba seduze kwakho.
Abantu banokuzazisa futhi babalulekile. Bebakhulu noma bebancane babalulekile.
Uma ukwazi lokhu, usendleleni eya ekuzuzeni ukuziphatha ngenhlonipho.
Futhi lokho kusho ukuthi ubuhlobo nomphakathi bungenzeka.
Umjikelezo oyi-two-way comm ubaluleke kakhulu kunalokho okushiwo.
Ukuxhumana kukhona ukuthi kuphendulwe noma kusetshenziswe.
Ukuxhumana, kunomjikelezo wokuxhumana okhona kuqala, kufanele kube khona ngaphambi kokuthi kuhanjiswe noma yimuphi umlayezo.
Imilayezo kufanele ihambe ngomgudu wokuxhumana. Umugqa noma umzila lapho ukuxhumana kuhamba khona kusuka kumuntu kuya komunye kufanele kube khona. Isibonelo, uma ungena egumbini lokulinda ehhovisi likadokotela futhi uqala ngokungakhulumi namuntu ngokukhethekile, mhlawumbe bazokushaya indiva. Abantu kule ndawo bazoqhubeka ukufunda amaphephabhuki abo noma ukukhuluma nabangani babo. Kufanele uqale ngokudala umgudu wokuxhumana, okusho ukuthi, uthole ukunakwa ngumuntu othile ofuna ukukhuluma naye bese uyaqala ukukhuluma.
Ukukhangisa akusebenzi ngaso sonke isikhathi umjikelezo wokuxhumana. Uzobona izikhangiso ezifana nokuthi “Thenga okwakamuva ______!” okungena ngqo kuphelele emoyeni . Kufanele wenze okuthile kuqala ukudala umgudu wokuxhumana. Futhi umugqa kufanele ube lula ukuze uthole impendulo, kungaba ngumuntu oyisebenzisayo, oyithengayo noma ophendulayo nje.
Isibonelo esihlekisayo kwakungumthengisi owayebhalela abantu futhi ebatshela ukuthi bathenge umkhiqizo obiza kakhulu ngaphandle kokuwuchaza ngisho nokusetshenziswa kwawo noma inani lawo. Akubanga nazimpendulo kwanhlobo—iqanda. Lokho kungenxa yokuthi umthengisi akazange adale noma imuphi umgudu wokuxhumana. Wayebhalela igama elivela kufayela noma ohlwini, kepha hhayi kumuntu.
Uma usebenzelana nabanye, kufanele udale umjikelezo wokuxhuma ngaphambi kokuba ukwamukeleka kwalokho okushoyo kwenzeke. Ngemuva kwalokho ungathola umyalezo wakho uzwakale.
Ukuziphatha ngenhlonipho kudinga umjikelezo wokuxhumana oyi--two-way. Lokhu kuyiqiniso ngisho nalapho ubhala izincwadi noma ushaya izingcingo.
Kulokhu uyazi izinto ezinjengokuthi “yisho kumame ukuthi ngiyabonga nobusuku obuhle njengoba usuka ephathini yokudla kwakusihlwa.” Lokho kuyi-acknowledgment elungile emjikelezweni wokuxhumana.
Kufanele uqonde ngempela umjikelezo oyi-two-way comm ukuze ukwazi ukuziphatha ngenhlonipho impela.
Ngaphandle komjikelezo oyi-two-way comm, ubudlelwane bomphakathi buyinto engenamsebenzi.
Amasiko awuchungechunge lwezenzo namazwi okwenziwa njalo ngendlela efanayo, kwesinye isikhathi njengengxenye yomkhosi wezenkolo noma isiko lomphakathi eqenjini noma uhlanga. Kubalulekile ukuthi uwazi futhi owahloniphe amasiko anoma yiliphi iqembu ongahlangana nalo ekwakheni ubuhlobo nomphakathi.
Uma umkhuba wamaNdiya aseMelika kuwukuba nemihlangano ehlelekile neqondile, futhi uma ezinye izinhlanga ezazihlala kudalo zinokuziphatha okuqondile kwezenhlalo nezindlela ababingelelana ngazo, akukona ukucela okuningi kumuntu wanamuhla ukuthi abe nokuziphatha ngenhlonipho futhi.
Kodwa “ukuziphatha ngenhlonipho” akusabonakali kangako ezikhathini zethu kunakuqala. Lokhu kuza ngenxa yokuthi ukuxutshwa kwezinhlanga eziningi namasiko emhlabeni jikelele kwenze amasiko ayekade enziwa kahle emaqenjini amancane anyamalale.
Uhlangabezana nendlela yokunganaki nokuvilapha ekusetshenzisweni kwemikhuba nokuziphatha.
Kodwa-ke, lesi akusona isizathu sokuba ngokwakho ube nemikhuba emibi
Ungaba nemikhuba emihle ngokuzijwayeza nje nokunaka okulandelayo:
a. Ukubaluleka kwabantu
b. Umjikelezo oyi-two-way comm
c. Amasiko endawo asetshenziswa njengokuziphatha okufanele
Lokhu kungokokuqala kumuntu osebenzisa izindlela namakhono obuhlobo nomphakathi. Kuleso sisekelo ungakha ukubukeka ubuhlobo nomphakathi obamukelekayo kanye nomthelela owenza i-PR iphumelele.